रौतहटमा ४ सय भन्दा बढी घर डुवानमा, २ बेपत्ता - VOICE OF NEPAL
रौतहटमा ४ सय भन्दा बढी घर डुवानमा, २ बेपत्ता
२८ असार २०७६, शनिबार ०७:४७
287 ??? ???????
असार २८ गते । चार दिनदेखिको अविरल वर्षाले रौतहटमा दुई जना वेपत्ता भएका छन् । पानीको सतह बढदै जाँदा र डुवानले गर्दा रौतहटमा ४ सय ३२ भन्दा बढि घर डुबानमा परेको छ । २ हजार ५ सय मानिस सुरक्षीत स्थानमा सारिएको छ । माधव नारायण नगरपालिका– ८ स्थित भोला महतोको फर्ममा बागमतीको पानी पस्नाले ४६ वटा राँगा बगाएको छ ।
इशनाथ नगरपालिका–३ औरैयाका ४० वर्षीय रामपुकार पटेल बिहीबार पानीमा डुबेर बेपत्ता भएका छन् । शुक्रबार गढीमाई नगरपालिका–७ धर्मपुरकी ४० वर्षीया दुलारीदेवीलाई बाढीले बगाएको छ ।
रौतहट स्थित बागमती नदीको टापुमा शुक्रबारदेखि फसेका १७ जना गोठालाको अझैसम्म उद्दार हुन सकेको छैन । गाइबस्तु चराउन गएका उनीहरु रुखमा चढेर उद्दारको लागि हारगुहार गरिरहेका छन् । रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाका अनुसार वृन्दावन नगरपालिका–१ बलेरी स्थित बागमती नदीमा फसेका उनीहरुको उद्दारको निम्ति सेनाको हेलिकप्टरको लिखित माग गरिएको छ । खराब मौषम र लगातारको वर्षाले हेलिकप्टर उड्न सकेको छैन ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरीको ११ नम्बर गण र नेपाली सेनाको इन्द्रवक्स गण डुबानमा परेको कारण त्यहाँका सुरक्षाकर्मी र सेना समेतले उद्दारको अपिल गरेका छन् ।
चारदिन देखिको अविरल वर्षाले सदरमुकाम गौरको भन्सार कार्यालय नजिक १५ फिट पानी जमेको छ । गौर–चन्द्रपुर सडकलगायत भित्री सडक समेत जलामय भएर कतै आवतजावत हुन सकेको छैन । सशस्त्र पहरीको ११ नम्बर गणमा ५ फिट पानी जमेको कारण उद्दारको लागि कतै जानसक्ने स्थिति नभएको प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण ढकालले जानकारी दिनु भयो । उहाँकाअनुसार मुसलधारे पानी परिरहेकोले डुंगा तथा रबर बोट सञ्चालनमा समस्या परेको छ ।
डुवानले गौरको प्रहरी भंसार सुरक्षा गार्डको कार्यालयको छाना मात्र देखिएको छ भने भुई तल्लाको भाग डुविसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ । उता कारागारको पहिलो तला समेत डुवानमा परिसकेको छ ।
भारतीय सिमा जोडिएका नाकामा पानीको सतह बढेको कारण त्यहा स्थापित प्रहरी चौकी ब्रम्हपुरी बसतपुर, प्रहरी चौकी औरैया, भंसार सुरक्षा गार्ड प्रहरी कार्यालय सुरक्षित स्थानमा स्थानन्तरण गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ । भारतले सीमाक्षेत्रमा बाँधेको बाँधको कारण पानीको निकास नहुँदा सदरमुकाम गौर डुबेको स्थानीय बताउँछन् ।
पेस्तोल सफा गर्दा पड्किएपछि हवल्दार घाइते